Tsy dia miverina fa maka fototra | NewsMada
Tsy dia miverina fa maka fototra
Par Taratra sur 09/08/2017
Mandeha any amin’ny tsy falehany ny ankamaroan-« javatra » na tranga misy eto Madagasikara. Ny mpitondra, miravaka diplaoma hatreny an-tampon-dohany. Ny harena, miavosa sy tsy tambo isaina. Ny Malagasy, malaza ho mahay sy kinga saina… Saingy mbola izao faraidiny izao ihany ny sarambabembahoaka. I Madagasikara, anisan’ireo firenena mitana ny laharana voalohany avy any amin’ny rambony raha ny filaharana maneran-tany ! Manaporofo ireo fa tsy sahaza sy tsy mifanentana amin’ny olana ny vahaolana. Zary savoan-danitra na mety ho safosioka mampandry adrisa ihany koa.
Tsy fanaovana dia miverina ny fakàna fototra indray. Vahaolana mahomby amin’ny firenena nanana ny naha izy azy toa an’i Madagasikara io. Manana ny fombany, ny teniny, ny taniny, ny kolontsainy, ny hareny, ny olobe fanajany, ny fahendreny, sns, ny Malagasy. Raha tsy ireny no hiverenana omen-kasina sy iainana, ho sasa-poana eto ny rehetra. Ho zary kianja filalaovan’ny vahiny i Madagasikara. Tsy ny tany ihany fa ny momba azy manontolo mihitsy hatramin’ny olona, zary « kilalaom-bazaha » rehefa nandalo ny « Rajakombazaha » !
… Ampiadiany dia miady. Ambakainy dia voambaka. Ataony taingim-bozona dia manaiky. Asainy mivarotra tanindrazana, tsy afa-mandà. Asainy mandihy dia mampiseho ny faritra mamoafady. Asainy mihira dia miteniteny foana…
Finiavana hiloloha ny an’ny tena ka hisakelika ny an’ny hafa. Hiverina sy hitodika amin’ny maha Malagasy azy ny tsirairay raha tanteraka io. Hanana ny fitiavan-tanindrazana (Madagasikara) sy fitiavan-tanin-drazana (toerana niaviana) ny tsirairay ka tsy hanaiky ny ho « kilalaom-bazaha » intsony.
… Saingy raha mbola maro ange ny « Rajakombazaha », ho sarotsarotra ny manatanteraka an’izany e !